Ndingakurira Sei Dambudziko Rokushungurudzwa Panyaya Dzepabonde?| Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quiche Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Kushungurudzwa panyaya dzepabonde kunorevei?
Ko kana ndichishungurudzwa panyaya dzepabonde?
Kushungurudzwa panyaya dzepabonde kunosanganisira zvinhu zvinoratidza kufarira bonde zvakadai sokubata munhu kana kuti kutaura mashoko akarerekera kunyaya dzebonde. Asi dzimwe nguva unogona kutadza kuziva kuti zviri kuitwa manyunyu here, kungotamba kworudo here, kana kuti kutori kushungurudzwa panyaya dzepabonde.
Unoziva here musiyano wezvinhu izvi? Pindura mibvunzo yokushungurudzwa panyaya dzepabonde woona kuti zvakamira sei!
Chinosuwisa ndechokuti kushungurudzwa panyaya dzepabonde hakuperi nekuti wapedza chikoro. Asi kana ukagara waziva zvokuita kana mumwe munhu akada kukushungurudza zvichakubatsira kuti uzive zvokuita paunozosangana nedambudziko iri paunenge wava kushanda. Uye zvaunenge waita zvinogona kuita kuti munhu ari kukushungurudza asashungurudzawo vamwe!
“Unofanira kutoratidza pachena kuti hauzvifariri. Kazhinji kana ukasaratidza munhu kuti hauzvifariri anongoramba achienderera mberi. Muratidze pachena womuudza kuti ‘Handizvidi zvauri kuita!’ Kana izvi zvikatadza kushanda udza mumwe munhu!”
“Haikona kusekerera majee akarerekera kunyaya dzebonde kana kuti kutaura nyaya dzebonde zvisina kukodzera. Kana ukafarira nyaya dzacho kana kuti ukashamwaridzana nevanhu vanofarira zvevakomana nevasikana, vamwe vachafunga kuti unozvifarirawo.”
Kuti mumwe munhu arege kukushungurudza hunge iwe wacho waziva kuti zvaari kuita kukushungurudza uye kuti ungaita sei kana ukashungurudzwa! Ona zvinhu zvitatu zvinogona kuitika woona kuti ungaita sei kana zvakadaro zvikaitika.
“Vamwe varume vandinoshanda navo vemazera ababa vangu chaivo vanogara vachinditi ndakanaka uye vanoti dai zvaiita vadzokera kuva pazera rangu. Mumwe wavo akambouya mumashure mangu achibva anhuhwidza bvudzi rangu!”​—Tabitha, 20.
Tabitha anogona kunge akafunga kuti: ‘Ndikangoita sokunge hapana chandiri kuona zvimwe vacharega.’
Nei kuita izvi kungangotadza kushanda: Vanoongorora nyaya idzi vanoti kana munhu akaita sokuti hapana chiri kuitika kazhinji kacho kushungurudzwa kwacho hakuperi kunogona kutowedzera.
Edza izvi: Ratidza pachena asi uchizviita neruremekedzo woudza munhu ari kukushungurudza kuti haudi maitiro aari kuita kana kuti zvaari kutaura. “Kana mumwe munhu akandibata zvandisingafariri,” anodaro musikana ane makore 22 anonzi Taryn, “Ndinomutarisa ndomuudza kuti usandibata futi. Kazhinji munhu wacho anenge asiri kumbozvitarisira kuti ndizvo zvandichamuita.” Kana munhu wacho akaramba achienderera mberi muratidze zvekare kuti hauzvifariri usamboneta kumuudza. Panyaya yokuzvibata Bhaibheri rinonyevera kuti: “Mirai makasimba, muchiratidza kuti makura uye muine chivimbo.”​—VaKorose 4:​12, The New Testament in Contemporary Language.
Ko kana munhu wacho akati anogona kukurova kana kukuitira chimwe chinhu chakaipa? Kana akadaro chirega kutaura naye nezvenyaya iyoyo. Ibva panzvimbo iyoyo nokukurumidza wonoudza mumwe munhu mukuru waunovimba naye.
“Pandakanga ndiine makore 11 ndiri kuchikoro vamwe vasikana vaviri vakandibatirana mukoridho. Mumwe wacho akanga ari ngochani uye akanga achida kuti ndidanane naye. Kunyange zvazvo ndakaramba, vakaramba vachindinetsa kuchikoro. Rimwe zuva vakandisundidzira kumadziro!”​—Victoria, 18.
Victoria anogona kunge akafunga kuti: ‘Kana ndikangoudza mumwe munhu ndinozonzi ndakapusa, kana kuti vanhu vanogona kuramba kuti ndizvo zvakaitika.’
Nei kuita izvi kungangotadza kushanda: Kana ukasaudza mumwe munhu, munhu uyu ari kukushungurudza anogona kutowedzera kukushungurudza kana kutoshungurudza vamwe.​—Muparidzi 8:11.
Edza izvi: Tsvaka rubatsiro. Vabereki kana kuti vadzidzisi vanogona kukubatsira kuti ukunde dambudziko iri. Ko kana vanhu vaunoudza pasina chavari kuita nenyaya yacho? Edza izvi: Pose paunoshungurudzwa, zvinyore pasi. Nyora musi wacho, nguva, nzvimbo yazvinenge zvaitikira, uye zvataurwa nemunhu wacho anga achikushungurudza. Rimwe bepa rine zvawanyora ripe mubereki wako kana kuti mudzidzisi. Vanhu vakawanda vakaona zvinhu zvakaita zvokunyorwa vanozvikoshesa kudarika zvokungotaura nomuromo.
“Pane mukomana aitamba rugby wandaitya zvisingaiti. Aiva akareba zvokusvika mamita maviri uye airema makirogiramu 135! Akanga atsidza kuti aizorara neni. Gore rose rakapera achingondinetsa mazuva ose. Rimwe zuva zvakangoitika kuti takangosara tiri vaviri mukirasi ndokubva atanga kuswedera pedyo neni. Ndakajamba ndichibva ndabuda nepadhoo ndichitiza.”​—Julieta, 18.
Julieta anogona kunge akafunga kuti: ‘Ndizvo zvinongoita vakomana.’
Nei kufunga kwakadaro kusingabatsiri: Munhu ari kukushungurudza haambofi akachinja maitiro ake kana achingosiyiwa akadaro.
Edza izvi: Usambofa wakasekerera kana kuratidza sokunge kuti unozvifarira. Zvaunoita kusanganisira chiso chako ngazviratidze pachena kuti hautombofariri zvaari kuita.
NYAYA YAKANYATSOITIKA 1:
“Ini hangu handitombofariri kuitira munhu zvakaipa. Saka kunyange vakomana pavaindishungurudza, ndaivaudza kuti handizvifariri asi ndaizviita ndichisekerera ndisingaratidzi kuti ndiri kurevesa. Vakabva vafunga kuti ndinenge ndinoda zvevakomana.”​—Tabitha.
Dai uri iwe Tabitha, waizodai wakaita sei kuvanhu vanokushungurudza? Nei waizodaro?
Chii chingaita kuti munhu ari kukushungurudza afunge kuti zvevakomana kana kuti zvevasikana unozvidawo?
NYAYA YAKANYATSOITIKA 2:
“Zvakangotanga apo vamwe vakomana mukirasi medu vakatanga kutaura majee akashata. Ndakamboita senge ndisinei nazvo kwemavhiki akati kuti asi zvakatozowedzera. Vakomana ava vakatanga kugara padivi neni vachindibata. Ndaivasundidzira kure asi vaingoramba vachidzoka. Pakupedzisira mumwe wavo akandipa bepa raiva rakanyorwa mashoko akaora. Ndakabva ndaripa mudzidzisi wangu. Mukomana wacho ambomiswa chikoro. Ndakazoona kuti dai ndakanga ndagara ndaudza mudzidzisi wangu kare!”​—Sabina.
Unofunga kuti chii chakaita kuti Sabina asakurumidza kuenda kunomhan’ara kumudzidzisi wake? Unofunga kuti zvaakaita zvakanaka here? Kana uchiti akagona sei uchidaro asi kana uchiti akatadza sei uchidaro?
NYAYA YAKANYATSOITIKA 3:
“Mumwe mukomana akasvika akawana hanzvadzi yangu Greg ichigeza. Mukomana wacho akabva aswedera pedyo-pedyo achibva ati kuna Greg, ‘Ndikise.’ Greg akaramba, asi mukomana uyu akaramba aripo. Greg akabva amusundidzira.”​—Suzanne.
Unofunga kuti Greg akashungurudzwa here panyaya dzepabonde? Kana uchiti ehe sei uchidaro asi kana uchiti aiwa sei uchidaro?
Sei vamwe vakomana vachizeza kutaura kana vakashungurudzwa nevamwe vakomana?
Zvakaitwa naGreg zvakanaka here? Uri iwe waizodai wakaita sei?
Mibvunzo yokushungurudzwa panyaya dzepabonde
“Ndiri kuchikoro, vakomana vaidhonza tambo dzebhodhi (bra) yangu uye vachitaura mashoko asingaiti, akadai sokuti ndaizonakidzwa kana ndaizorara navo.”​— Coretta.
Unofunga kuti vakomana ava
A Vaiita manyunyu here?
B Vaita senge vanomuda here?
C Vaimushungurudza panyaya dzepabonde here?
“Pataiva mubhazi mumwe mukomana akatanga kutaura mashoko akaora achindibata-bata. Ndakanakurira ruoko rwake kure ndichibva ndamuudza kuti andisiye. Akanditarisa zvokuda kundinyadzisa.”​— Candice.
Unofunga kuti mukomana uyu aiitei kuna Candice?
A Aiita manyunyu here?
B Aita senge anomuda here?
C Aimushungurudza panyaya dzepabonde here?
“Gore rapera, mumwe mukomana aigara achinditi anondida uye aida kuti tidanane asi ndaimuudza kuti handidi. Dzimwe nguva aipuruzira ruoko rwangu. Ndaimuudza kuti asiyane nazvo asi aisateerera. Rimwe zuva pandaisunga bhutsu akandirova kumagaro.”​— Bethany.
Unofunga kuti mukomana uyu aiitei?
A Aita senge anomuda here?
B Aiita manyunyu here?
Pamibvunzo yose iri mitatu mhinduro yakarurama ndiC.
Kushungurudza munhu panyaya dzepabonde kwakasiyana sei nokuita manyunyu kana kuti kuita senge unoda munhu? “Kushungurudza munhu panyaya dzepabonde kunenge kuchinakidza iye wacho ari kushungurudza asi kuchikuvadza munhu ari kuzviitirwa,” anodaro musikana anonzi Eve. “Kunyange ukaudza munhu wacho kuti hauzvidi anongoramba achizviita.” Kushungurudzwa inyaya yakakura chaizvo. Hakungogumiri pakuvhiringidza zvidzidzo muchikoro neutano asi kuti unogona kuzopedzisira wava munhu wehondo pakuda zvepabonde.
Dzidza zvimwe:Ona chitsauko 32 chebhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1, chinoti “Ndingazvidzivirira Sei Pamabhinya?”
Vakawanda vanoshungurudzwa vanoona sokuti hapana chavangaita kuti vapedze dambudziko iri. Nyaya ino inotsanangura zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingakurira Sei Dambudziko Rokushungurudzwa Panyaya Dzepabonde?
ijwyp nyaya 9
Zvinotaurwa Nevezera Rako Nezvekushungurudzwa Panyaya Dzepabonde